‘सुगर’ बारे एक विशिष्ट चिकित्सकको पढ्नै पर्ने राय « Naya Bato
विभिन्न किसिमको चेकजाँच र परीक्षणभन्दा डा. गिरीले उनलाई रोग र त्यसका रोकथामबारे बेलिविस्तार लगाइन्। उनका अनुसार पुट्ट पेटलाई धेरै नेपाली खानदानी पहिचान सम्झन्छन्। कतिपय त पेटलाई नै ‘व्यक्तित्व’को मापक ठान्छन्। तर धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ- त्यो पुट्ट पेट व्यक्तित्वको मापक होइन, बरु रोगको घर हो। त्यसले निम्त्याउने रोगहरूमध्ये एक सुगर हो।
सुगर हुन नदिन र भइसके नियन्त्रण गर्न धेरै केही गर्नै पर्दैन। खानेबानी र जीवन शैलीले नै धेरै फरक पार्छ। फतक्क पाकेकोभन्दा हल्का पाकेको तरकारी खानुपर्छ। थोरै पाकेको तरकारीमा सुगर थोरै प्रसोधित हुन्छ, यो शरीरका लागि राम्रो हो। विस्तारै अनि खाना चपाएर खानु पर्छ। दुई-दुई घन्टाको फरकमा खाइरहनु पर्छ।
छिटो-छिटो खायौं भने शरीरले खाना छैन रहेछ, त्यहि भएर हामीले छिटो-छिटो खाइरहेका छौं भन्ने बुज्छ र खानालाई बोसोमा पगालेर राख्न थाल्छ, अनिकालमा खानका लागि। त्यस्तै समयमा खाना नखाने र लामो अन्तरालमा खाने गर्दा पनि शरीरले के बुझ्छ भने – यो मानिसको खानको टुंगो छैन, त्यहि भएर पेटमा खाना आएको बेला बचाएर राख्नु पर्छ। बिस्तारै खाने र ठिक समयमा खाने बित्तिकै, शरीरले खाना ‘स्टोर’ गर्न र बोसो बनाउन छोड्छ, स्वस्थ जीवन त्यहि बाट सुरू हुन्छ।
सुगरको महामारीबाट बच्न नेपालीले खानेबानीमा ठूलो परिवर्तन गर्नुपर्ने डा. गिरीको सुझाव छ। तर समस्या के छ भने, धेरै नेपाली रोग लागिसकेपछि समेत सचेत हुँदैनन्। थला परेपछि मात्र डाक्टर भेट्न जाने धेरै छन्। उनका अनुसार दक्षिण एसिया र नेपालमा सुगरका बिरामीको दिनदिनै बढ्दै छन्। ‘यही रफ्तारमा बिरामी बढे, १० वर्षमा संसारभरीका सुगर बिरामीमध्ये भारत वरिपरिमात्रै ९० प्रतिशत पुग्नेछ,’ उनले भनिन्।
बिरामीले बुझेको संकेतमा टाउको हल्लाए। हामी उनको कोठाभित्र छिरेको डेढघन्टा बितिसकेको थियो। घडी हेर्दै गिरीले भनिन् – एकजना बिरामीलाई एक घन्टा त लागिहाल्छ। डाक्टरले पनि राम्ररी नबुझाउने र बिरामीले पनि राम्ररी नसुन्ने हाम्रो ठुलो समस्या रहेको उनको अनुभव छ।